Qeybta 1: Baadi QuickTime
Qeybta 2: Top 3 ciyaartoy oo ka ciyaari kara AVCHD on Mac
Qeybta 3: Beddelaan AVCHD oo aan laga badinin tayo leh
Qeybta 4: Gubashada AVCHD in DVD on Mac
Habka ugu fiican si loo hubiyo in AVCHD la ciyaari Mac waa ciyaaryahanka default ayaa lagu rakibay pre galay Mac iyo waxaa loo magacaabay ciyaaryahanka QuickTime. Waa ma aha oo kaliya ugu wanaagsan, laakiin sidoo kale habka ugu nabad badan si ay u hubiyaan in arrinta aan lagu xalin kaliya laakiin user helo natiijada ugu fiican ee arrintan la xiriira. Sidoo kale waa in la ogaadaa in ciyaartoyda AVCHD ugu fiican kaliya ma lagu soo bandhigay in tutorial marka ay timaado Mac laakiin user lagu bari doonaa sida loo isticmaalo habka ugu fiican Sidoo kale waa mid ka mid ah hababka ugu fiican ee aad u hubiso in AVCHD la ciyaaray iyadoo aan kordhin kasta. Waxaa sidoo kale in la xuso in sida ugu wanaagsan si loo hubiyo in video AVCHD la ciyaaray ama gubo oo isticmaalaya DVD ah ayaa sidoo kale waxaa looga hadli doonaa tutorial taas oo ay tahay in la xuso in siyaabaha lagu sharaxay ama iman doonaa ka qayb dambe ee tutorial tani ma aha oo kaliya ay fududahay in la maareeyo, laakiin user sidoo kale iyaga fulin karo iyada oo aan wax arrintan iyo dhibaato. Waxa kale oo hubin doona in user helo natiijada ugu wanaagsan iyo ciyaaro aan arin oo dhan. Qaladka ugu weyn ee uu soo kala kulantay in la hubiyo in QuickTime uusan ciyaari video ah ayaa sidoo kale lagu xusay in tutorial iyo user inay hubiyaan in ugu fiican in la siiyo nidaamka iyo terminologies la xiriira in la soo sheegnay in tutorial ka dhigi karaan arrintan la xiriira. Waxaa sidoo kale in la xuso in user ma aha oo kaliya natiijada ka heli kartaa sida rabitaan laakiin sidoo kale hubin karaa in in farsamooyinka AVCHD iyo hababka la soo sheegnay lagu dabaqo oo aan wax arrintan oo dhibaato arrintan la xiriira.
Part1: Baadi QuickTime
Mararka ay dhacdo in QuickTime leeyahay in nooca file AVCHD aan la taageeray iyo qaybaha la xiriira inaan la rarin karo. User waxaa ka codsaday in la hubiyo in codsiyada waxaa lagala soo bixi oo lagu rakibay in la hubiyo in wixii kaloo la sameeyo iyada oo aan wax arrintan iyo dhibaato. Waxaa sidoo kale in la xuso in QuickTime ah waxaa loo arkaa ciyaaryahanka default u Mac ah iyo sabab la mid ah loo eegin qaabka waxa loo baahan yahay inuu ka ciyaaro oo dhan qaabab iyo kororsi la xiriira fudayd iyo qanacsanaanta isticmaalaha sida uu ayaa loogu talagalay si loo hubiyo in wixii kaloo la sameeyo iyada oo aan wax arrintan iyo dhibaato. Ayaa ah qaabab la xidhiidha ee AVCHD haddii aan la soo ciyaaray ee QuickTime waa qalad halis ah laakiin xalka la xiriira waa mid fudud quruxsan oo user ku raaci karaa tallaabada deg deg ah in ay doonaynin inay yimaadaan qeybtii dambe ee qaybtan. User ayaa sidoo kale loo baahan yahay si loo hubiyo in talaabooyinka la soo halkan ku xusan la raacay habka ugu fiican in la hubiyo in arrinta la xalin aan wax ka kaaftoomi iyo arrinta. Waxaa sidoo kale in la xuso in hoos ku qoran yihiin tallaabooyinka buuxda arrintan la xiriira:
File AVCHD waa in la xaq u riixi in la hubiyo in waxyaabaha ku xirmo waxaa lagu soo bandhigay
The file BDMV sidoo kale waa in ay xaq u riixi in la hubiyo in waxyaabaha ku xirmo waxaa lagu soo xulay iyo resultantly soo bandhigay.
File index.bdm waa in la bedelo si INDEX.BDM sida gudahood folder bdm ka kooban yahay ee waa in kiiska sare si QuickTime faylka ciyaari karo
File AVCHD waa in la double riixi si loo hubiyo in arrinta la xalin iyo user helo natiijada ugu fiican ee arrintan la xiriira.
Part2: Top 3 ciyaartoy oo ka ciyaari kara AVCHD on Mac
Ka dib waa seddex ciyaaryahan oo loo isticmaali karo in lagu ciyaaro AVCHD on MAC:
Muuqaalada Key waxaa ka mid ah xalka ugu wanaagsan iyo taageero ah ee qaabab oo dhan.
Ciyaaryahanka 2. BS
Teknoolajiyada BS: Developer
Muuqaalada waaweyn waxaa ka mid baraa fudud iyo interface guud waa user saaxiibtinimo
3. 5K ciyaaryahan
Part3: Beddelaan AVCHD oo aan laga badinin tayo leh
Wondershare Waxaa loo yaqaan mid ka mid ah qabanqaabooyinka ugu wanaagsan u isticmaala samaynaya si loo hubiyo in user helo ugu fiican oo gobolka ka mid ah natiijooyinka tahay in arrintan la xiriira ka. Waxaa sidoo kale in la xusay in waxa ugu fiican waa in la sameeyaa in arrintan la xiriira by in la hubiyo in talaabooyinka in la hoos ku xusan aan la raacin oo keli ah, laakiin waxaa sidoo kale hayaa maskaxda mustaqbalka si loo hubiyo in wixii kaloo la sameeyo iyada oo aan arin kasta oo dhibaatada. Geedi socodka la xiriira waa sida soo socota:
1. URL ayaa http://www.wondershare.com/guide/video-converter-ultimate.html waa in ay soo booqdaan si ay u hubiyaan in barnaamijka la geliyo oo bilaabay:
2. AVCHD video looga baahan yahay ka dibna waa in lagu daro oo ay hubiyaan in ay ku darto files button waxaa riixi:
3. Laga bilaabo guddiga xaq user ay u baahan tahay si ay u hubiyaan in qaab la xiriira oo qaab beddelidda loo baahan yahay la doorto si loo hubiyo in hannaanka horumarka ee wanaagsan ee suurtagalka ah:
4. Marka geeska hoose ee saxda ah waxaa jira badhan ku tilmaamay sida uu diinta Islaamka iyo user wuxuu u baahan yahay in la hubiyo in badhanka la isku soo riixayo in samaysay baahan yahay iyo dhammayn nidaamka sida ugu dhakhsaha badan ee suurtogalka ah:
Part4: Gubashada AVCHD in DVD on Mac
1. Laga soo bilaabo URL http://www.wondershare.com/mac-video-converter-ultimate/guide.html#tab_03 user ay u baahan tahay si ay u hubiyaan in ciyaaryahanka la soo bixi oo bilaabay:
2. user ayaa markaas u baahan yahay in la hubiyo in button gubashada waxaa lagu weeraray hoose ee suuqa kala dhinaca gacanta midigta si aad u hubiso in wixii kaloo la sameeyo oo arrinta la xalin sida ugu dhakhsaha badan ee suurtogalka ah:
3. button gubatay ayaa markaas waa in la riixi si loo hubiyo in DVD ku bilowday gubanaya iyo waxa ay sidoo kale ka baxayo geedi socodka ee buuxa:
> Resource > Mac > 3 waxyaalood in la ogaado oo ku saabsan AVCHD on Mac